यसकारण कमरेड प्रचण्ड निदाउन सक्दैनन् अचेल « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
यसकारण कमरेड प्रचण्ड निदाउन सक्दैनन् अचेल
काठमाडौं, मंसिर १५ – एकाबिहानै प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भने, ‘अब भएन, मेरो पार्टीमा पुरै अराजकता बढ्यो। म जनार्दनलाई कारबाही गर्छु। मन्त्रीबाट पनि निकाल्छु।’ तर देउवाले त्यसमा समर्थन जनाएनन्। उनको धारणा थियो, ‘हुन्न, हुदैँ हुन्न। मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसै त सबै कांग्रेसी एमालेको पुच्छर बन्नुहुँदैन भन्दै छन्।
मलाई निर्णय गर्न गाह्रो पर्छ।’ यो संंवाद लोकमानविरुद्ध महाअभियोग संसद्मा दर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात असोज १९ गते बिहान दुई शीर्ष नेताबीच भएको हो। रातभरि निद्रा नलागेपछि प्रचण्डले एकाबिहानै देउवालाई बालुवाटार बोलाएर सल्लाह लिएका थिए।
शेरबहादुरले पुरै हस्तक्षेपको भाषामा रोकेपछि रातभरिको निर्णय परिवर्तन गर्न प्रचण्ड बाध्य भएको बताइन्छ। बरु देउवाको सुझाव थियो, ‘पहिले लोकमानको किस्सा टुंग्याऊँ, त्यसपछि जे मन लाग्छ गर्नुस्।’
प्रचण्ड नआत्तिऊन् पनि किन! साँझ साढे ८ बजे दिनभरिको थकाई मेट्न विश्रामकक्षतिर जाँदै गर्दा अमरेशकुमार सिंहको फोन आयो, ‘हैन के गर्या हो त्यस्तो! तपाईका सांसदको पनि हस्ताक्षर छ त!’ प्रचण्ड पनि जंगिए, ‘एमालेका सांसद कसरी मेरा हुन्छन्? मेरो पार्टीले के गर्यो, के गरेन त्यो तपाईलाई थाहा हुन्छ कि मलाई?’ अमरेशले प्रमाण पेश गरे, ‘नपत्याए अनलाइनमा हेर्नु न! सबैको हस्ताक्षरसहितको सूची छ।’
प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयलाई अह्राए, ‘ए केटा हो, अनलाइन हेर त।’ त्यसबेला उनी छक्क परे जब सन्तु दराईजस्ता आफ्ना अति विश्वासिलाको समेत हस्ताक्षर देखे अनि जनार्दनको पहलकदमीमा महाअभियोग दर्ता भएको पुष्टी भयो। प्रचण्ड स्वयंले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन्, त्यो रात उनी निदाउनै सकेनन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा साँझ प्रचण्ड नरेन्द्रजंग पिटरलगायत केही माओवादी विश्लेषकसंग कुरा गर्दै थिए। त्यसैबेला सहयोगीले फोन ल्याएर दिए।
फोनमा सभामुख ओनसरी भनेकी थिइन्, ‘एमालेका साथीले महाअभियोग दर्ता गराए।’ एक सहभागीका अनुसार निकै हतास हुँदै उनले छलफल टुङ्ग्याका थिए। कसैलाई केही बताएनन् तर ढुक्क थिए कि एमालेको मात्र तयारीमा लोकमानविरुद्ध आक्रमण भएको हो। तर, अमरेशको फोनले झट्का लाग्यो। आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ।
नेतृत्वको व्यवस्थापनमा छलफल गर्न बाँकी – भीम रावल
२९ चैत (रासस) – नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले नेकपा..
भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न भीम रावलले मागे प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ
काठमाडौँ -एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने विषयमा..
पार्टी एकता नहुने खबर बाहिरिरहेका बेला चितवनबाट प्रचण्डले यसो भने
नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले–मोआवादी केन्द्रबीच तोकिएको..
मोदीको दलका एक सांसद विरुद्ध बलात्कारको आरोप, प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान
नयाँ दिल्ली- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक दल, भारतीय जनता..
नेपाल एअरलाइन्सका मजदुरको आन्दोलनले सबै उडान बन्द, यात्रुहरु मर्कामा
काठमाडौं, २९ चैत । नेपाल वायुसेवा निगमका मजदुरले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय..
म रेल ल्याउँछु, तपार्इंहरू उत्पादन बढाउनुस् : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलवे सेवा छिटै सञ्चालन..
काठमाण्डौ पुग्यो फाईनलमा..,
बलात्कार बिरुद्ध यसरी एक जुट हुँदैछन् नेपाली..बैशाख १ गते दबाब -याली